कञ्चनपुरको नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा एसएसबीले गोली चलाएपछि स्थानीयको भागाभाग — sancharkendra.com
कञ्चनपुरको नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा एसएसबीले गोली चलाएपछि स्थानीयको भागाभाग
कैलाली । कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका–१० को कुत्तियाकभर नजिक मा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले गाेली चलाएको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र दशगजामा आपसी विवादमा भारतीय एसएसबीका जवानहरूले दर्जनौं राउण्ड गोली चलाएका हुन् ।
मदिरा सेवनपछि एसएसवीका जवानहरूबीच विवाद हुँदा बिहीवार साँझ सीमा स्तम्भ नं २१ नजिक गोली चलाएको स्थानीयले बताएका छन्। गोलीको वर्षा भएजस्तै आवाज आउँन थालेपछि दशगजा क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको भागाभाग समेत भएको थियाे। गोली चलाउने दुवै जवानलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।
भारतीयहरुले पटकपटक सिमानामा नेपालीहरुलाई तर्साउन अनेक काण्डहरु गर्दै आएका छन् । केहि समयअघि नेपाल भारतको सीमा क्षेत्र त्यो पनि दशगजामा नै भारतले बनाउन लागेको बाटोको स्थानीयले विरोध गरेर रोकेका थिए ।
एक साता देखि मोरङको जहदा गाँउपालिका वडा नं. १ कालाबञ्जरको दशगजामा भारतले बनाउदै गरेको बाटो प्रहरी प्रशासनले रोक्न नसकेपछि स्थानीय आफैले निर्माण कार्य रोक्न लगाएका हुन् ।
दशगजा भित्रै बनाइएको सो बाटो निर्माण पछि नेपाल तर्फको भूभाग डुबानमा पर्ने भएकाले स्थानीयवासीले प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी गराए पनि प्रहरीले चासो नदिएको जहदा गाँउपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष प्रदीपचन्द्र यादवले बताए ।
बिहारका विधायक मञ्चन केशरीको विधायक फण्डबाट करिब ४ लाख १५ हजार भारतीय रुपैयाँमा सो पीसीसी बाटो निर्माण भईरहेको थियो ।बिहारको कुशमाहा ग्राम पञ्चायत वडा नं. ४ आमगाछीको दशगजामा करिब २ सय मिटर बाटो निर्माण भईसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरित बिहार सरकारले दशगजामा बाटो बनाउनु गलत भएको भन्दै नेपालीहरुले बिरोश जनाएका थिए भने प्रहरी प्रशासनले चासो नदिदा बाटोको निर्माण रोक्न स्थानीय आफै जुट्नु परेको थियो ।